“Hiverina amin’ny tompony ny fitondrana” hoy I Mektoub ! – MyDago.com aime Madagascar
“Hiverina amin’ny tompony ny fitondrana” hoy I Mektoub !
Magro 28 Fev 11
Tsy nijanona ny Sabotsy 19 Febroary teo ny fikarakarana ny fodian’ny filoha Ravalomanana fa vao mainka aza eo am-panomanana ny fodian’izy mirahalahy mianaka ny ankolafy Telo, hoy Olivier Rakotovazaha tamin’ny kabariny androany tetsy amin’ny Magro Behoririka.
Mahakasika ny fanaovan-tsonia ilay sori-dalana narafitr’ i Dr Simao dia nilaza ny Sekretera Jeneralin’ny MFM fa tsy misy sori-dalana manakery izany raha tsy misy sonian’ izy roalahy any ivelany, ary rehefa malgacho-malagasy hoy izy dia eto izany no hatao ny sonia , ny dikan’izany dia mody ny filoha roalahy hoy hatrany izy.
I Mektoub kosa indray dia nanakiana ilay fizarana vary mora ataon’ny FAT, fito gony isaky ny tanana ve dia ho ampy ho any vahoaka any “Sud Est” izay maro anaka sy mahery miteraka? Manao zavatra kitoatoa ny FAT hoy hatrany izy.
“Tsy misy hatahorantsika intsony eo fa haka fitondrana isika ary mody i Dada sy ny Amiraly” hoy ihany ity mpikambana ao amin’ny ankolafy Zafy Albert ity , tsy maintsy “ hiverina amin’ny tompony ny fitondrana” hoy I Mektoub.
Ny solombavam-bahoaka Zafilahy Stanislas Rakotomandimby indray dia nilaza fa tsy mihemotra amin’ny sarotra ny tolona fa vonona hamerina ny aran-dalana hatrany. “Tsy resy isika fa milefitra ary manaraka ambokony” hoy izy. Manana vahoaka ny ankolafy telo ary miandradra ny fiverenan’i Filoha Ravalomanana hatrany, fanaraina farany no omena ny FAT hoy izy. Mahakasika ny politika Frantsay dia nilaza ihany koa I Zafilahy fa mivaly amin’ny fitondrana Frantsay ny ratsy nataony tamin’ny Madagasikara.
“Tsy Radidy na Zafy na Ravalo no ratsy tsy mety mampiditra teran-tany Malagasy etp an-Tanindrazana fa ny olona manondinina azy ireo izay miaraka amin’I Rajoelina ankehitriny” hoy ity solombavam-bahoaka voafidy tany Vavantenina ity.
Hiverina alohan’ny 26 juin izy !
Auteur Solo RazafyPublié le 28 février 2011 1 mars 2011 Catégories Magro, Malagasy, Négos, PolitiqueÉtiquettes Marc Ravalomanana
3 réflexions sur « “Hiverina amin’ny tompony ny fitondrana” hoy I Mektoub ! »
1 mars 2011 à 5 h 29 min
Mazava ho azy ny reaka!
Efa nazava ela be fa « Mivaly amin’ny frantsay ny ratsy nataony tamin’ny Madagasikara » !
Izao, fanina, mirepirepy etsy sy eroa, soloina ny Ambasadera, atao ny remanimà fa ehe !!!
« Minoa fotsiny ihany » !
Izao no fantatro tsy maintsy miala eo rajoelina sy ny namany fa na dia izany aza mila midina an-dalam-be isika,miresaka amin’ny miaramila izay fatantsika tsirairay avy ary tsy mividy lasantsy any amin’ny total intsony.
Précédent Article précédent : Video – Olivier Rakotovazaha au Magro
Suivant Article suivant : Video – Manoela Magro 25/02/11